thahakhabar.com . ३ महीना अघि
एथ्लेटिको असन्तुष्ट, २०० मिलियन माग्यो एजेन्सी : स्पेनिस च्याम्पियन एफसी बार्सिलोनाले एथ्लेटिको मड्रिडका फ्रान्सेली स्ट्राइकर एन्टोइन ग्रिजम्यानलाई अनुबन्ध गरेको छ। लामो समयको विवादकाबीच बार्सिलोन...
विश्व च्याम्पियन फ्रान्सका स्ट्राइकर ग्रिजम्यान बार्सिलोनामा
म्याड्रिड : स्पेनिस लिग च्याम्पियन बार्सिलोनाले विश्व च्याम्पियन फ्रान्सका स्ट्राइकर एन्टोइन ग्रिजम्यान भित्र्याएको छ। बार्साले एट्लेटिको म्याड्रिडबाट उनलाई आबद्ध गरेको हो। २८ वर्षीय ग्रिजम्यानले ...
बार्सिलोना गए ग्रिजम्यान, बने छैटौं महँगा खेलाडी
setopati.com . ३ महीना अघि
स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले फ्रेन्च फरवार्ड एन्टोनी ग्रिजम्यानलाई भित्र्याएको छ। बार्सिलोनाले ला लिगाको प्रतिद्वन्द्वी क्लब एट्लेटिको म्याड्रिडबाट १२० मिलियन युरोमा (१४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ) ग्रिजम्य...
अन्ततः ग्रीजम्यान बार्साका खेलाडी बने
nepalkhabar.com . ३ महीना अघि
फ्रान्सका विश्वकप विजेता एन्टोनी ग्रीजम्यानलाई बार्सिलोनाले अनुबन्ध गरेको छ। एथ्लेटिको मड्रिडबाट बार्साले ग्रीजम्यानलाई १२० मिलियन युरो तिरेर अनुबन्ध गरेको बीबीसीले जनाएको छ। बार्सा र ग्रीजम्यानब...
ratopati.com . ३ महीना अघि
एजेन्सी-एट्लेटिको म्याड्रिडका स्ट्राइकर एन्टोइन ग्रिजम्यान अन्ततः बार्सिलोनामा अनुबन्ध हुने पक्का भएको छ । ग्रिजम्यानलाई बार्सिलोनाले एक सय २० मिलियन युरोमा अनुबन्धन गरेको हो । २८ बर्षीय ग्रीजम्यान...
अन्तत: एन्टोइन ग्रीजमन बार्सिलोनामा, अब खेल्नेछन् मेसी र सुअरेजसँगै
pahilopost.com . ३ महीना अघि
अन्तत: फरवार्ड एन्टोइन ग्रीजमन स्पानिस जायन्ट क्लब बार्सिलोनामा अनुबन्ध भएका छन्। ला लिगा च्याम्पियन बार्सिलोनाले ग्रीजमनलाई अर्को ला लिगा क्लब एट्लेटिको मड्रिडबाट १ सय ८ मिलियन पाउण्डमा क्लब भित्र...
बार्सिलोना जाने भए लुई बेरी
२७ असार, काठमाडौं । स्पेनिस च्याम्पियन बार्सिलोनाले इंग्ल्याण्डका १६ वर्षे स्ट्राइकर लुई बेरीलाई अनुबन्ध गरेको छ । वेष्ट ब्रोमविच एल्बियनबाट बार्सिलोना गएका उनले तीन वर्षे सम्झौता गरेका छन् । उनी ...
ग्रिजमन बार्सिलोनामा अनुबन्ध, नेइमारकाे सम्भावना समाप्त
Ujyaaloonline.com . ३ महीना अघि
स्पेनकाे क्लब बार्सिलोनाले स्टार खेलाडी एन्टोइन ग्रिजमनलाई अनुबन्ध गरेको छ । एट्लेटिको मड्रिडबाट बार्साले उनलाई एक सय आठ मिलियन पाउण्डमा अनुबन्ध गरेको हो । पछिल्लो दुई सिजनदेखि क्लबमा भित्र्याउने ...
अन्ततः बार्सिलोनाले ग्रिजम्यानलाई भित्र्यायो
२७ असार, काठमाडौं । बार्सिलोनाले फ्रान्सका स्ट्राइकर एन्टोनी ग्रिजम्यानलाई अनुबन्ध गरेको छ । लामो अन्यौलतापछि एथ्लेटिको मड्रिडका ग्रिजम्यान नाउक्याम्पमा आउन भएका हुन् । २८ वर्षीय विश्वकप विजेताले ...
ग्रिजम्यानलाई भित्र्याउने बार्सिलोनाको अन्तिम तयारी
baahrakhari.com . ३ महीना अघि
एजेन्सी । एन्टोनी ग्रिजम्यान बार्सिलोना आउने चर्चा निकै पहिलेदेखि चलिरहेको छ । स्पेनिस क्लब एट्लेटिको मड्रिडमा सफल फुटबल जीवन बिताएका उनले ला लिगा च्याम्पियन बार्सिलोनामा आउने कुरा चलेको हो । बार्...
एजेन्सी । एन्टोनी ग्रिजम्यान बार्सिलोना अनुबन्ध हुने भएका छन् । स्पेनिस क्लब एट्लेटिको मड्रिडमा सफल फुटबल जीवन बिताएका उनी हाल ला लिगा च्याम्पियन बार्सिलोनामा अनुबन्ध हुने भएका हुन्। बार्सिलोनाले ...